Mmemme GvSIG - Ka anyị banye n'ime ya ... - Geofumadas
Julaị, 2008 Geospatial - GIS, GvSIG, manifold GIS
M na a na-eme sneaky, ma nke ọ bụla, na-ekpe a ìgwè nke ndị na-abụghị na-ese siga na-achọ gvSIG N'ezie nke m nwere a izu ịmụta iji ya na-amalite n'otu ga-akpọrọ m 2 izu m n'abalị oge. Ọzọkwa na a post m na-amalite a ọhụrụ Atiya n'akụkụ m na panel: gvSIG.
Ha ajụghị ngwa ahụ maka ngwa ahụ, ha rịọrọ maka n'efu ma dị mfe iji ... ọtụtụ n'efu, ọ dị mfe iji ajụjụ arụ! ... na-atọ ụtọ na-enweghị mgbagha! Echere m na m ga-eji ohere ahụ tụnyere Manifold na ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ha nwere $ 250, m ga-akwado Manifold maka na amaara m ihe ọ na-eme na ihe ọ na-anaghị eme, mana ebe ọ bụ na ha achọghị imefu ego mgbe ahụ ọ ka mma ịga maka ngwaọrụ nwere akwụkwọ ntuziaka dị njikere ma bụrụ nke kwụsiri ike (ọ bụ ezie na usoro mmụta agaghị abịa n'efu ... ma ọ bụ nkem)
Maka ndị na-amaghị ihe GvSIG bụ, ebe a bụ isi:
The gvSIG omume na-ebilite (dị ka ihe na-enye obi) na njedebe nke 2003, ọ e mepụtara IVER ndị na ndibọhọ egwuregwu, ma nwere institutional nche anwụ nke European Regional Development Fund (ERDF), ndị Ministry of Infrastructure nke Valencia na University Jaume m
Akwụkwọ ikike bụ GNU GPL
GNSIG 100% na Java ka emepụtara (ma e wezụga ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ECWy ndị nwe ọnụahịa MrSID), ya mere ọ na-agba ma Windows, Linux na Mac.
Ụlọ akwụkwọ ndị e mepụtara bụ ụkpụrụ dịka Geotools na Java Topology Suite dị ka JTS n'etiti ndị ọzọ.
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na o doro anya na ọ na-akwado “internationalization”… o kwesiri imeghari asụsụ ala onye ọrụ ... mmmm?
Na-akwado faịlụ ndị dị ka shp, dxf, dwg, dgn, kml na ọbụna gml
Na-akwado ụdị rasta dị ka MrSID, GeoTIFF, ECW na ENVI
Kwadoro ụkpụrụ OGC gụnyere WMS, WFS, WCS na ọrụ aha
Na-akwalite àgwà ise nke ha chọrọ mgbe Wepụta: Portable (Windows / Linux n'oge ahụ), modular, Open iyi, ọ dịghị-na-eri ikikere, Interoperable (dịkarịa ala na AutoCAD, MicroStation na ArcView n'oge), n'okpuru ụkpụrụ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgbatị, enwere ike ịmekọrịta ọrụ IMS na ihe ịtụnanya ndị ọzọ site na ndọtị ndị gụnyere ikiri ma dezie OpenPreetMap mapping, na ijikọ na ndọtị ESRI dị ka ArcSDE na ArcIMS ... n'etiti ndị ọzọ.
Ihe kacha baa uru nke GVsIG Program bụ obodo nke na-akpata ya, nkesa y akwụkwọ... ihe na-ekwe nkwa a ụfọdụ larịị nke nkwado na ọ bụghị ihe niile na-emeghe nyiwe nwere ... dịkarịa ala na-ukwuu mesiri ike na Spanish.
Ebe ị nwere ike budata gvSIG
Ebe ị nwere ike ibudata GvSIG nkuzi
N'ebe a, ị nwere ike were Usoro GvSIG
Previous Post«Previous Virtual Earth na-emelite onyonyo, tinyere mba ndị Hispanic
Next Post GVSIG: Mmetụta MbụNext »
7 Na-aza "gvSIG Mmemme - Ka anyị tinye ya mgbe ahụ ..."
site na admin terimakasi atas tutorial walk really karena based menambakan wawasan atau ilmu pengtahuan gan.
A na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị ga-echekwa
website kwuru, sị: http://sem.mahasiswa.atmaluhur.ac.id/
na ebe nrụọrụ weebụ website: http://www.atmaluhur.ac.id/
gvSIG na-akwado faịlụ microstation (dgn) na usoro V7
Ụdị V8 adịghị akwado ha.
fernando lazcano kwuru, sị:
Morningtụtụ ọma, enwere m ajụjụ maka inwe Microstation faịlụ ma nwee ike itinye GVSIG na viseversa, enwere nsogbu ma ọ bụ na ọ bụghị.
I kwesiri, enwere m olileanya na enwere m ohere iwepụta oge iji kwurịta ihe dị iche iche
Na nso nso a, amalitere m ichoputa gvSIG mgbe m nyochachara ọtụtụ ụzọ ọzọ.
Echere m na maka asụsụ Spanish na-ekwu okwu ọma, ọ ga-abụrịrị ka ọ na-eweta mgbasa na oge mmepe, ọ ga-aga n'ihu na-aga n'ihu.
N'ime mpempe akwụkwọ gị adịghị m ahụ ntụgharị sextant bụ nke kachasị amasị maka ịghachite.
epa! Ọ dị mma na ha nọ ebe ahụ ... oge ụfọdụ ọ na-enye echiche nke ịdọka uwe ndị ahụ n'ihu onye ọ bụla. hehe
... na-atụ aro Manifold ... mmekọrịta ịhụnanya / ịkpọasị maka ama ochie, ọ bụ ezie na anyị ga-ahụ.
Hey, enwere m obi ụtọ na ị malitere gvSIG, ekwenyesiri m ike na ihe niile ị ga - ekwu agaghị anabata gị karịa ndị gvSIG niile anyị gụrụ gị (ọ ga - eju m anya ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị m).
Ọ bụrụ na ịnwe obi abụọ ọ bụla, egbula oge ịbanye na ndepụta ndị ọrụ ebe obodo ndị ọrụ ga-eji obi ụtọ nyere gị aka.
Banyere nhọrọ, n'ihu Manifold… nke ọma, oge ga-agwa.